DHAGEYSO:Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo oo maanta ku eg | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo oo maanta ku eg
DHAGEYSO:Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo oo maanta ku eg
Afar sano ayaa ka soo wareegtey markii la doortey madaxweyne Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, waxaa uu Maanta muddo xileedkiisu dhamaanayaa, iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo laga gaarey hanaanka doorashada ee Soomaaliya.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaana sheegay inay taasi ka yara beddelantahay nidaamkii 20 kii sano ee u dambeeyey uu dalka Soomaaliya ku socdey.
Sidoo kale Wuxuu muddo xileedkaan dhamaadey ku soo aadayaa xili jahwareer siyaasadeed iyo isfaham la’aan ay ka dhex taagan tahay dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya.
Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Maamul goboleedyada oo aan heshiis ka gaarin nidaamka doorashada ayuu gabagaboobay waqtigii dowlada.
Musharraxiinta xilka madaxweynaha doonaya ee dhanka kalena mucaaradka ah ayaa sheegay in laga billaabo 8-da February oo maanta ku began aanay madaxweyne u aqoonsaneyn Maxamed C/laahi Farmaajo oo dalka 4 Sano soo hogaaminayay, iyagoo ku baaqay in la sameeyo gole qaran oo kumeelgaar ah dalkana Doorasho gaarsiiya,kuwaasoo ay Xubno ka yihiin Gudoomiyeyaasha Baarlamaanka labadiisa Aqal,Hogaamiyeyaasha Maamul goboleedyada,Xubno Musharaxiinta Matalaya iyo bulshada Rayidka Soomaaliyeed.
Beesha caalamka oo si dhaw ula socota xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin ismari waaga taagan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan.
Xubno ka tirsan mucaaradka ayaa xalay kulan la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee Baarlamaanka Fedraalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxay isla meel dhigeen hadana warbaahinta gudaha qaarkeed ayaa qoraysa in qodobada laga wada hadlay kuwii ugu Muhiimsanaa aan la isku waafaqin kadib markii uu gudoomiye Mursal ku Gacan sayray Soo jeedinta Mucaaradka oo ahayd inuu Doorkiisa qaato oo uu noqdo kusime Madaxweyne inta ay doorashadu ka dhacayso.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo kamid ah musharraxiinta mucaaradka ayaa sheegay in xaalad hubaanti la’aan ah uu galay dalka, isagoo arintaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo.
Kulankii ugu dambeeyay ee ay madaxda Soomaalida ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ayaa todobaadkii hore ku soo idlaaday natiijo la’aan, taasoo horseeday inaan wax heshiis ah laga gaarin doorashada la filayay inay dhacdo.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo maalin ka hor khudbad ka Hor jeediyay xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa muujiyay rajadiisa ah in ugu danbeyntii heshiis buuxa laga gaari karo khilaafka hareeyay doorashada Soomaaliya, inkastoo uu eedeyn ballaaran dusha kaga tuuray maamulada Puntland iyo Jubbaland oo uu sheegay inay mar walba xagal-daacinayeen kulamada lagu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka doorashada Soomaaliya ku gadaaman.
Balse xildhibaannada qaarkood ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isagu lahaa mas’uuliyada fashilka shirkii Dhuusa-Mareeb 4 kaddib markii uu ku adkeystay inay dowladda maamuleyso doorashada kuraasta Aqalka Hoose ka soo galaya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya arintaas oo Maamulka Jubaland diidan yahay horseedayna khilaafka Xooggan ee dowlada dhexe madaxdeeda iyo kuwa Jubaland.
Ugu danbayntii lama oga saacadaha soo socda sida ay wax isku beddeli doonaan ayadoo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu Maalinta Berri oo Talaado ah uu khubad ka Horjeedin doono baarlamaanka,sidoo kale lama oga in Ra’isulwasaaruhu ku codsan doono khudbadaasi muddo kordhin Xukuumadiisa iyo in kale.
Qaar ka mid ah shacabka ku Nool Magaalada Muqdisho ayaa dhankooda waxay aragtidooda ka dhiibteen muddo Xileedka hay’adaha dowladda ee dhamaaday ayadoona Hanaanka Doorashada lagu heshiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo waxyaabaha ay dowladdiisu ku guulaysatay waxaa ka mid ah arrimaha Dayn Cafinta oo Guulo waa weyn ay ka Samaysay Soomaaliya,sidoo kale tiro koobka Ciidamada Qalabka sida iyo Mushaarkooda oo meel cad la saaray,Barnaamijka Isxilqaan oo lagu dhisay Xarumo dowladeed oo Muhiim ah sida Tiyaartarka Qaran,Madxafka Qaranka,tuuladii Ciyaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah Taalooyinkii hore ee Taariikhiga ahaa iyo goobo kale oo danguud ahaa.
Sidoo kale Dowladda uu Hoggaaminayo madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ee uu Maanta muddo Xileedkeedu ku eg yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha aysan ku guulaysan xiriirka Maamulada iyo dowlada dhexe,wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland, CiribtirkaAl-Shabaab,Kiiska badda oo aan wali xal laga gaarin iyo qodobo kale
Previous articleSAWIRO:Hooyada madaxweynaha dalka oo abaal marin la guddoonsiiyay
Next articleRaila oo kulamo ku saabsan BBI ka wado Kisumu